Izindaba - Isingeniso sezinto zokumboza nokunamathisela zomshini wokulaminetha we-PUR
1. Khulisa inani leglue elisetshenzisiwe. Uma inani leglue lincane kakhulu noma ingaphezulu lengxenye ye-substrate ingafakwanga i-adhesive, kuzoba nzima ukuthi lezi zingxenye ezimbili zihlanganiswe ngesikhathi sokuhlanganiswa. Singakhetha i-anilox roller ngeseli elijulile, noma sandise inani le-glue ebusweni be-substrate ngokwandisa ingcindezi yeroli yerabha nokunciphisa ingcindezi yokuxhumana phakathi kukadokotela blade ne-anilox roller. Kwezinye iziqeshana zefilimu zepulasitiki, ukwelashwa kwe-corona kungenziwa ngaphambi kokumbozwa ukwenza ubuso bube bushelelezi, ngaleyo ndlela kuthuthukiswe ikhono le-substrate lokumunca okunamathelayo nokwandisa inani leglue ebusweni.
2. Ukukhetha izinga lokushisa elifanelekile eliphakeme kakhulu noma eliphansi kakhulu kuzothinta ukusondelana kwefilimu ehlanganisiwe. Lapho i-substrate eboshiwe isomile, izinga lokushisa lokushisa liphezulu kakhulu noma ngemuva kokupheka okushisa okuphezulu, ungqimba lwendawo yokunamathisela luzokwenziwa ikhabhoni, ngaleyo ndlela lonakalise amandla okubopha we-adhesive. Uma izinga lokushisa lokumisa liphansi kakhulu, imininingwane yomkhiqizi izokwenza ukuthi isinamatheliso singalapheki ngokuphelele, i-viscosity yesinamatheliso isibi, futhi inhlanganisela ayinamandla. Ngemuva kwesikhathi esithile, amabhamuza kungenzeka akhe kwifilimu ehlanganisiwe, ezolimaza ikhwalithi ehlanganisiwe yomkhiqizo. Vele, singakhetha ukunamathela kwephrinta yedijithali ngokuhle ukumelana nokushisa okuphezulu nokubuyisa ukumelana nokujwayela ukomisa okushisa okuphezulu, njengokusebenzisa i-polyurethane adhesive.
3. Khulisa ingcindezi ehlanganisiwe ngokufanele. Ukucindezela okweqile noma ingcindezi engalingani emaphethelweni womabili we-roller eyinhlanganisela kuzodala imibimbi ebusweni befilimu ehlanganisiwe, futhi kuzokwakhiwa imigudu engenalutho kwimibimbi ngemuva kokuhlanganiswa, okuzothinta ukusondelana komkhiqizo ophelile. Ukwandisa ngokufanele ingcindezi yenkomponi kunenzuzo yokuthuthukisa amandla okuhlanganisa wekhompiyutha.
Ngaphezu kwalokho, ukuze kuthuthukiswe umphumela wokubopha wefilimu ehlanganisiwe kanye nekhwalithi yokupakisha ubisi, kuyadingeka ukugwema izinto zangaphandle, uthuli nokunye ukungcola okunamathela kokunamathiselwe noma indawo eyinhlanganisela ye-substrate. Amazwi okuphetha Lapho usebenza, qaphela ngokucophelela izinkinga ezahlukahlukene nokwehluleka enqubweni yokukhiqiza, bese usebenzisa izindlela ezingenhla ukuqeda ukwehluleka okunengqondo. Lapho kunezinkinga eziningi noma ukwehluleka, kungahle kungenzeki ukusebenzisa indlela eyodwa. Ngalesi sikhathi, imishini yokupakisha kufanele igwenywe, igxile ekuxazululeni izinkinga ezibalulekile, bese isebenzisa ezinye izindlela ukuxazulula izinkinga ezincane ngamunye ngamunye.
I-Hot Melt Glue Isicelo, Umshini Wokunamathisela Okushisayo Wokuncibilika Okushisayo NgeSitifiketi seCe, Umshini Wokunamathisela we-Pur Hot Melt Glue Nonwoven, Okuzenzakalelayo Hot Melt Glue wokulaminetha Machine, Umshini Wokushisa we-Pur Hot Melt Adhesive Laminating, Umshini Oshisayo Wokunamathisela Okushisayo Wengubo Engubo,